‘हल्ट प्राइज’ – जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन
विनय ज्याेती आइतवार, आश्विन १२, २०७६, १४:१३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय दुई कुराले विश्व तातेको छ । पहिलो – क्लाइमेट चेन्ज । दोस्रो – ‘क्लाइमेट चेन्ज’विरुद्धको शसक्त आवाज । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ नामले विश्वमा चर्चा पाएको जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि धारणा पछि ‘क्लाइमेट चेन्ज’ नामाकरण गरिएको थियो जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार विरोध गरिरहे ।
क्लाइमेट चेन्ज(जलबायु परिवर्तन)का प्रत्यक्ष विरोधि अमेरिकी राष्ट्रपति र यसबारे काम गर्न नसकेका विश्वका शासकलाई युएनको जारी बैठकमा ठाडो चुनौती आएपछि जालवायूसम्बन्धी कार्यक्रम, र्‍याली र आन्दोनल विश्वभरी अगाडि बढेका हुन् ।
१६ वर्षे स्वीडेनी युवती ग्रेटा टुनबर्ग यस कार्यको अभियान्ताका रुपमा विश्वसामु चिनिएकी छिन् । उनको योगदान, दृढता र साहसले विश्वका मानिस प्रभावित बनेका छन् । उनैको अटल सहासका प्रभाव हुनुपर्छ अहिले विश्वका सबै सञ्चार माध्यमको हेडलाईन नै ‘ग्रेटा टुनबर्ग’ र ‘जलवायू परिवर्तन’ बनेको छ ।
उनले हालसालै युएनको विश्वव्यापी महाधिवेषनमा एक भाषण दिइन । दिएको भाषणमा नेताहरुलाई यसो भनिन्, 'हामीले तपाईहरुलाई हेरिरहेका छौं, यो सबै गलत भइरहेको छ, म यहाँ हुनु हुँदैन थियो । म समुन्द्रपारीको मेरो स्कुलमा पढिरहेको हुनुपर्थ्यो । तपाईहरुले मेरो सपना र मेरो बालापन खोस्नुभएको छ, तपाईहरुको हिम्मत कसरी भयो ? मानिसहरु पीडामा छन्, मरिरहेका छन्, सम्पूर्ण इकोसिस्टम ध्वस्त हुँदै छ, ठूलो लोपको सुरुवात हुँदैछ, तर तपाईहरुले पैसा र आर्थिक बृद्धिको दन्ते कथाको बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईहरुको कसरी हिम्मत भयो ?'
विश्वमा जलवायू परिवर्तन रोक्न सरकार, मानव समुदाय लगायतका सबै उद्योगीलाई दवाव सिर्जना गर्न आन्दोलनको सुरु भएको छ ।
आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा समेत छ । नेपालमा ‘हल्ट प्राइज’ले सुरु गरेको आन्दोलनलाई आन्दोलनकर्ताले आन्दोलनको ‘नेपाल भर्जन’ भन्ने गरेका छन् । आन्दोलनको चर्चा जति गरे पनि कमै हुन्छ । तर नेपालमा कसरी सुरु भयो त यस्तो आन्दोलन ?
हल्ट प्राइज विद्याथीको एक ग्लोबल संस्था हो । नेपालमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयमा यसका संस्थाहरु छन् – जसमध्ये एक पोखरा विश्वविद्यालय हो । हल्ट प्राइज यस्तो संस्था हो, जसले युवामा वातावरणसम्बन्धी व्यवसायीक विचारलाई उजागर गर्छ । दिगो विकासका साथै वातावरण संरक्षणका नाममा विद्यार्थीसँग भएका व्यवयासीय विचारलाई कार्यदिशा दिने काम हल्ट प्राइजले गर्ने गरेको छ ।
यो एक ग्लोबल प्रतिपर्धा पनि हो । नेपालमा पनि यसको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । अब नेपालका विभिन्न ४ ठाउँमा प्रतिपर्धा सुरु हुन लागेको छ । जनवरीमा क्याम्पसबाट प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न विश्वविद्यायलबाट आएका विद्यार्थीलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराएर एक जनालाई चीन पढाईनेछ ।
चीनको सांघाइमा हल्ट प्राइजको दोस्रो स्पर्धा हुन्छ । अन्त्यमा चीनबाट विजयी भएका एक विद्यार्थी लन्डनमा हुने फाइनल प्रतियोगितामा भाग लिन पुग्नेछन् । लण्डनबाट विजयी हुनेले एक मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउँछ । यसरी यो कार्यक्रम बर्षभरी चलिरहन्छ ।
यो वर्षको नारा ‘बिल्ड विजनेस विथ सस्टेनेबल इन्भारमेन्ट’ हो । यसको अर्थ ‘दिगो विकासँगै व्यवसाय बढाउ’ भन्ने हुन्छ ।
वातावरण सम्बन्धी हल्ट प्राइजको आन्दोलन
नेपालको हल्ट प्राइजले माथि भनिएजस्तो प्रतिस्पर्धा मात्र गराउँदैन । उनीहरु वातावरण सम्बन्धि ग्लोबल कार्यक्रममा सहभागि भएका छन् । नेपालमा पनि विश्मा जस्तै प्रत्येक शुक्रबार र्याली हुन थोलेको छ । वातावरण संरक्षणका लागि भैरहेको विश्वको आम मानिसका धारण जस्तै नेपालका युवा युवती पनि सचेत हुन थालिसकेका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयका हल्ट प्राइज प्रतिनिधि विज्ञान गौतम भन्छन्, ‘ग्रेटा थेनवर्ग भन्ने स्वीडेनी बालिकाले अब त अतिनै भयो, संसारका नेताहरुले केही पनि गरेनन, अब हामीले यसरीनै छोड्यौँ भने ५०/६० वर्षमा पृथ्वी ध्वस्त नै हुन्छ । हामीले जतिनै कार्वनडाइअक्साइड उत्पादन हटायौं भनेपनि ४०/५० वर्ष लाग्छ । त्यसैले वातावरण संरक्षणको नाममा आजबाट मुभमेन्ट सुरु गर्नुपर्यो भनेर सुरु भएको हो । यो विश्वभरि नै चलिरहेको छ । त्यसकै नेपाल भर्सन हामीले गरेका हौं ।’
हल्ट प्राइजले गत शुक्रबार बसन्तुरमा करिब ३ सय मानिसकाबीच हरेक शुक्रबार निकालिने र्‍याली नेपालका पनि चलायो । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार तीनकुनेको खाली चौरमा सय विरुवा रोपेर वातावरण जोगाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी कार्यक्रमको नेपालमा पनि उद्घाटन भएको छ । -तस्वीर : विज्ञान गाैतम
देश कसले चलाउँदैछ ? संसद कि सामाजिक सञ्जाल ! यस्ता पोष्ट/ट्वीटहरुले सरकार र जनताको बिचमा दुविधा बढाएको छ । मानिसमा सरकारप्रति जागेको आशा हराउँदै गएको छ । अन्ततः समाजमा नयाँ धारको विकास हुने निश्चित छ । नयाँ धारमा जाँदा मानिसमा धेरै परिवर्तनहरु आवश्यक पर्दछन् । नयाँ धार भनेको राजनीतिक धार होइन यो मानवीय चेतनाको नयाँ बाटो हो । बिहिवार, श्रावण २, २०७६, १३:०२:००